स्टार दीपिका, श्रद्धा र सारापनि प्रहरी नियन्त्रणमा, आयो यस्तो बयान ! - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » स्टार दीपिका, श्रद्धा र सारापनि प्रहरी नियन्त्रणमा, आयो यस्तो बयान !
मुम्बई । चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणलाई आज मुम्बईको प्रहरी (ना–रको–टि–क्स) कन्ट्रोल ब्यूरोले छ घण्टा नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीमाथी ६ घण्टा लगातार प्रश्न गरिएको छ । सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु अनुसन्धानसँग जोडिएको फराकिलो ‘ड्र–ग्स’ छानबिनमा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर र सारा अली खानसहित पादुकोणलाई बोलाइएको थियो।
श्रीमती पादुकोणलाई मुम्बईको कोलाबाको एभलीन गेस्ट हाउसमा सोधपुछ गरिएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ । जहाँ कन्ट्रोल ब्यूरोको विशेष अनुसन्धान टोली उपस्थित थियो । एनसीबीको बल्लार्ड एस्टेट कार्यालयमा छुट्टै सोधपुछ भइरहेको जनाईएको छ । श्रीमती कपूर र सुश्री कपूर छाडिसकेका छन्। सारा अली खानसँग भने अझै सोधपुछ चलिरहेको छ ।
पादुकोणका प्रबन्धक करिश्मा प्रकाशलाई पनि लगातार दोस्रो दिन सोधपुछ भइरहेको छ। उनी आज बिहान एनसीबी कार्यालय पुगेकी थिइन्। शुक्रवार, एनसीबीले करिश्मा प्रकाश र अभिनेता रकुल प्रीत सिंहलाई व्हाट्सएप च्याटको सामग्रीको बारेमा सोधपुछ गर्‍यो जसमा भनियो कि गाँ–जा खपतको लागि खरीद गरिएको थियो। प्रकाशसँगको प्रश्न निक्कै लामो समय चल्यो । चलचित्र अभिनेता रकुल प्रीत सिंह भन्दा धेरै लामो समय सम्म उनीसँग सोधपुछ चल्यो स्रोतले भन्यो।
अभिनेता रिया चक्रवर्तीको सोधपुछमा तानिएपछि बलिउडमा अधिकांश कलाकार जोडिदै आएका छन् । जुन १४ मा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको मुम्बईको घरमा मृत्यु भयो । त्यसको तीन महिनापछि उनको मृत्युको कारण जोडिएर चर्चित कलाकार फसिरहेका छन् ।
ब्यूरोको स्रोत अनुसार ठूला औ’ष’धि का’र्टे’लको अनुषरण नै गरिरहेका छन् या व्यक्तिगत उपभोक्ताहरू मात्र हुन् त्यो छुट्याउन जरुरी छ । एक अधिकारीले भने एजेन्सीले कथित उपभोक्ताहरू मार्फत आपूर्ति नेटवर्क बनाएको देखिन्छ । बलिउड ए–लिस्टरलाई यही कारण धमाधम बोलाइरहेको छ।
सेप्टेम्बरमा गिरफ्तार हुनु अघिको सोधपुछको क्रममा अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीले यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सारा अली खान र रकुल प्रीत सिंहलगायत स्टारहरूको नाम लिइएको बताइएको छ। उनीहरुका वकिलले भने यो दावी अस्वीकार गरेको छन् ।
सारा अली खान र सुशांत सिंह राजपूत फिल्म केदारनाथमा एकसाथ काम गरेका थिए । मुम्बई उच्च अदालतमा रिया चक्रवर्तीको जमानत याचिका अनुसार सुशान्त राजपूतले फिल्मको शूटिंगको लागी लिएका थिए ।
त्यपछि उनलाई लत नै बसेको थियो । दीपिका पादुकोण र श्रद्धा कपूरको नाम जय साहको फोनमा व्हाट्सएप च्याटमा भेटियो । सुशांत सिंह राजपूतका प्रबन्धक र प्रतिभा फर्मका शीर्ष कार्यकारी जया साहासँग पनि औ’ष’धि अ’नुसन्धा’न एजेन्सीले प्रश्न गरेको छ ।
सुशांत सिंहका परिवारले उनका अधिवक्ता विकास सिंहमार्फत “एनसीबी अनुसन्धान पनि मुम्बई पुलिस प्रोब को दिशातिर गइरहेका छ । यसका लागि अझै निक्कै ठूला स्टारहरुलाई सोधपुछका लागि बोलाउने सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।